एभोकाडोको एकै बोटबाट लाख आम्दानी::kamananews
धनकुटा : स्कुलडाँडाका राजकुमार तामाङको बारीमा ३५ वर्ष पुरानो एभोकाडोको बोट छ। यसले अहिले पनि गतिलै फल दिन्छ। अघिल्लो वर्ष उनले यही बोटको एभोकाडो बेचेर उनले एक लाख रुपैयाँ कमाए। गत वर्षभन्दा यसपटक दोब्बर फल लागेको छ। व्यापारी बारीमै आएर दुई लाख रुपैयाँ भाउ तोके। तर, तामाङले दिएनन्। भने, आफैंले बिक्री गर्दा अढाई लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने भएर दिइनँ।घ्यू फलको रूपमा परिचित एभोकाडोको बजार भाउ र उत्पादन राम्रो हुँदा किसानले एउटै बोटबाट लाखभन्दा बढी कमाइ गर्न थालेका छन्।
स्कुलडाँडाकै वीरबहादुर तामाङको बारीका तीन बोटले एक लाखभन्दा बढी आम्दानी दिन्छ। घर खर्च यसैबाट चलेको छ। वीरबहादुर भन्छन् । ६० बोट लगाएकोमा २२ वटाले फल दिन थालिसके। उनले आधा रोपनी क्षेत्रफलमा एभोकाडो लगाएका छन्। राम्रो बोटले दस क्विन्टलभन्दा बढी फल दिन्छ। अहिले बोटै भाँचिने गरी फल लागेको छ। बाँसको टेको लगाउनु परेको छ। पाँच ओटा एकै पटक तौलँदा दुई किलो वजन हुन्छ। अहिले बजारमा एक सय ८० देखि दुई सय रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री हुन्छ। पाँचवटा फल बिक्री गर्दा तीन सय ६० देखि चार सय रुपैयाँसम्म आउँछ। बोटले फल थाम्न नसकेपछि नुघिएका फल टिपेर बिक्री गरेको उनले बताए।
आधा घन्टामै ५ करोडको कारोबार,
काठमाडौं । नेप्से परिसूचक लयमा फर्किने संकेत गरेको छ । सेयर बजार कारोबार सुरु भएको आधार घन्टामै नेप्सेमा करिब ५ करोडको कारोबार हुँदा केही दिन बिग्रिएको बजारमा सुरुवाति सुधारको संकेत देखिएको हो । कारोबार सुरु...
कम्युनिस्ट शासनमा गरीबलाई यस्तो आपत, समाजवादको नारा हावा गफैमा सिमित
धनगढी । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक समाजवादको गफ दिने गरेपनि व्यावहारिक अवस्था अर्कै देखिएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिमका गरीब सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । केही दिनयता उपभोग्य सामग्री...
-गंगामाया अधिकारीको खातामा एक करोड, सम्झौताअनुसार ०७१ मै दिनुपर्नेमा ढिलो भएकाले ब्याजबापत थप २० लाख -आर्थिक सहायता माग्दै गृहमा ५ हजार निवेदन आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दुई महिनामै नेपाल सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट विभिन्न राजनीतिक दलका...
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सञ्चार माध्यमहरुको विरोध गरेका छन् । बिहीबार बोलाइएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै उनले सञ्चार माध्यमहरुले आफु विरुद्ध नियोजित समाचार लेखेको आरोप लगाए । नेपाल दुर...
किष्ट बैंकका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवाली पक्राउ परेका छन् । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले उनलाई भारतबाट पक्रेको हो। प्रहरी स्रोतले उनी भारतबाट पक्राउ गरेको पुष्टि गरे पनि विस्तृत जानकारी भने दिएको छैन...
जानिराखौ, दशैं – तिहारमा यी दिन बैंक बन्द हुँदै
बैंकमा जम्मा गरेको रकम दशैंका लागि झिक्न कहिले जाँदै हुनुहुन्छ ? अवश्य पनि समयमै जानु होला । तर, दशैं–तिहारमा कुन दिनदेखि कुन दिनसम्म बैंकहरु खुल्ला हुन्छन् तपाईले जानकारी पाउनु भएको छ ? यदि छैन...
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेको झापाको दमक नगरपालिका–४ र ९ मा अवस्थित हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानले ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर तिर्न अटेर गरेको छ । २०६३ सालदेखि शाह नागरिक हैसियतमा फर्किएदेखि बगानले कर...
चिनीको मूल्य ८० रुपैयाँ, एक सय पुग्ने अनुमान, दैनिक ७० लाखको लुट – तापाई के भन्नुहुन्छ यस्तो कार्यलाई ?
दशैंको मौका छोपेर चिनी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले चिनीमा दैनिक ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लुटिरहेका छन्। चिनी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको दबाबमा सरकार पर्नुका साथै उनीहरूको मनोमानी रोक्न नसक्दा अहिले विश्वबजारमा चिनीको मूल्य घटे पनि नेपाली...